MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA COTON DE TULEAR - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Coton de Tulear
Furio, oo ah lab Coton de Tulear dhammaantood waa la hagaajiyay
Liistada eeyaha Coton de Tulear ee loo yaqaan 'Mix Breed Dogs'
Cah-ton oo uu qoray Tu-lay-ahr
'Coton' waa ereyga Faransiiska ee cudbiga. Sida magaca ka muuqata, muuqaalka ugu caansan ee 'Coton de Tulear' waa jaakaddiisa, taas oo ah cudbi ama qalafsan tahay halkii ay ka ahaan lahayd silky. Waxay leedahay jaakad dhaadheer oo dhaadheer. Timaha qalafsan waxay daboolayaan ciribta hore ee qafiifka ah. Midabbada waxay ku yimaadaan caddaan, cadaan leh liin, cadaan leh midabyo bunni ah, cadaan madow, cadaan midabkeedu yahay midab ama midab. (caddaan saafi ah ayaa doorbidaya soosaarayaasha bandhigga.) Qaarkood waxay leeyihiin calaamado waxoogaa huruud ah dhagaha.
Kani waa eyga nooca Bichon ah. Waa mid saaxiibtinimo, dabacsan, kalgacal iyo feejignaan leh. Cotons waa eeyo aad u dad badan oo si wanaagsan ula dhaqan carruurta, eeyaha kale iyo xayawaanka. Waxay si aad ah uguxirantahay gurigeeda iyo sayidkeeda, iyagoo doonaya inay had iyo jeer joogaan joogitaankooda iskuna dayaan sida ugu wanaagsan ee ay raalli uga yihiin. Coton wuxuu sameeyaa ilaalin weyn. Khiyaanooyin iyo layaab buuxa ayaa ka buuxa rabitaan kasta oo sayidkiisa. Mid ka mid ah astaamahooda ugu xiisaha badan waa u janjeera inay ku boodaan kuna socdaan lugaha gadaashooda. Hadaladooda kaftanku waxay xoojinayaan guri kasta oo diyaar u ah inuu xoogaa daqiiqado ah maalintii ku qaato ciyaaraha lagama maarmaanka u ah iyo qurxinta. Coton si dhakhso leh ayuu wax u bartaa, laakiin wuu yara adkaan karaa haddii aan la helin hoggaan habboon. Iyagu waa dad caqli badan oo u hamuun qaba inay shaqeeyaan. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga hortago Cudurka Dog yar , bini-aadamku kiciyay dhibaatooyinka dhaqanka . Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka.
Dhererka: 10 - 12 inji (25 - 30 cm)
Miisaanka: 12 - 15 rodol (5.5 - 7 kg)
Coton wuxuu ku fiican yahay nolosha guryaha. Iyagu si caddaalad ah ayey gudaha ugu firfircoon yihiin waxayna sameyn doonaan wax hagaagsan iyadoon deyr lahayn.
Koootooyinku waxay jecel yihiin inay dabaashaan oo ciyaaraan. Waxay ku raaxaystaan ​​meelo ballaadhan oo ballaadhan waxayna raaci karaan sayidyadooda fardaha masaalooyin badan. Waxay si fiican uga shaqeeyaan aagag kala duwan oo ka mid ah isboortiga eyga, sida tijaabinta xirfadaha dhaqdhaqaaqa iyo qabashada. Sida firfircoon ee ay yihiin, waxay si fiican ula qabsan doonaan xaalada qoyska, ilaa inta loo qaadayo a socod maalinle ah .
Qiyaastii 14-16 sano.
Timaha dhaadheer ee timaha iftiinku u baahan yahay waxay u baahan yihiin maalin kasta, is qurxin taxaddar leh Timaha dhintay waa in la cadeeyaa oo la shanleeyaa. Timaha dheeraadka ah ee u dhexeeya suufka cagaha iyo dhegaha gudaha waa in laga saaraa. Uma baahna qubeys ka badan hal jeer ama laba jeer sanadkii taasoo ku filnaan doonta inay nadiif ahaadaan. Koodhka waa inaan la karin. Koofiyadaha ayaa daadiya wax yar timo la'aan. Tarankaani wuu kufiican yahay kuwa xasaasiyadda qaba .
Coton waa nooc Bichon ah oo la xiriira Faransiiska Bichons iyo Talyaaniga Bolognese. Xitaa mararka qaar waa suurtagal in eeyaha wadaniga ah ee noocyada kale ah la isku tallaalay. Waxay u badan tahay inay Madagascar la timid ciidamo Faransiis ah, ama maamuleyaashii raacay. Noocani wuxuu ahaa mid aan la aqoon illaa laga soo celiyo Yurub iyo Ameerika sanadihii ugu dambeeyay ee 20. Qarniyaal, Coton wuxuu wehel u ahaa dadka hodanka ah ee deggan Tulear, koonfurta Madagascar, halkaas oo ay ku sii waday inay ku soo caan baxdo. Ey asal ahaan la mid ah ayaa caan ka ahaa jasiiradda Faransiiska ee Reunion, oo ka baxsan xeebta bari ee Madagascar, laakiin wuxuu noqday bakhtiyey . Nooca asalka ah ee 'Bichon' wuxuu dib u soo celiyay suurta galnimada kun sano ka hor ama ka badan. In kasta oo ay weli naadir tahay, haddana waxay caan ku noqotay fasalka sare ee Madagascar sannado qaarkood waxayna caan ku noqotay Maraykanka. Coton waa 'Eyga Rasmiga ah ee Madagascar,' Coton-ku waa 'Eyga Rasmiga ah ee Madagascar,' iyo sedex geesoodle Coton ayaa lagu sharfay shaanbad boosta lagu diro 1974. Coton de Tulear waxaa si rasmi ah u aqoonsaday AKC sanadkii 2014.
Gun Ey, Kooxda Saaxiibka
Lahaanshaha sawirka Chesterfield Coton de Tulear
shar pei oo lagu qasay god
'Kani waa eeygayaga, Reno. Iyadu waa saddex jir Coton de Tulear iyo farxadda gurigeenna. Reno waa sababta aan u go'aansanay inaan cunno Coton. Dabeecaddeeda saaxiibtinimo, deggenaan iyo caqli badan ayaanay ka duwanayn eey kasta oo aynu waligeen yeelanay. Runtii iyadu waa eey weyn oo ku jirta jirka yar eey.
'Reno way ku qanacsan tahay inay jiifato dhabta ama cagaha laakiin daqiiqada aan ku xusno erayga' banaanka 'way xiiseyneysaa inay ciyaarto. Reno wuu jecel yahay inuu ciyaaro Frisbee. Aad ayey u badan tahay inaan higgaadino ereyga F-R-I-S-B-E-E ama iyadu waxay ku ordi doontaa wareegyo oo waxay ku ciyaari doontaa laba cagood illaa aan ka helno jaakadahayaga iyo kabahayaga si aan u tagno oo aan ugu tuurno iyada.
Madadaalo kale oo uu ugu jecel yahay Reno ayaa ninkayga kula fuuli doonta cows-ka. Waxay si uun u garaneysaa goorta ay tahay in la gooyo cawska oo ay sugto inuu ka bilaabo jarista. Si xamaasad leh ayey u boodaysaa oo ay u raaci doontaa isaga labada saacadood ee ay qaaddo oo dhan si loo jaro cawskeenna. Waxaan ugu yeernaa 'Kabtan Reno' ' Lahaanshaha sawirka Cotons of Adam's Eden
'Reno waa mid ka mid ah seddex cuno oo aan leenahay waana hubaal inay tahay' Boqoradda 'eeyaha. Iyadu waa hoggaamiye naxariis badan laakiin haddii kuwa kale midkood ka baxo khadka waxay u sheegaysaa iyaga. Markay eeyaheeda yar yaryihiin iyadu sifiican ayey u ilaalisaa iyaga, iyada oo u oggolaanaysa kuwa kale wax yar ama laba ur laakiin iyadu WELIGEYNA xanaaqi mayso markii mid ka mid ah qoyskeeda aadanaha ama asxaabtooda xayawaanka rabaayadda ah oo iyaga dhuuqo.
'Waxaan daawanay Eyga Whisperer mararka qaar waxaan u aragnay inay waxtar weyn u leedahay isku dheelitirka gurigeenna iyo eeyahayaga. Anigu waxaan ahay hogaamiyaha baakada dhamaan eeyahayaguna waxay heleen booskooda baakadka. Waxaan si joogto ah ugu dadaalaa xagga joogteynta iyo jawiga deggan ee gurigeenna si aan u ilaaliyo dabeecadda wanaagsan, ee wanaagsan eeyahayaga. Runtii way shaqaysaa! Lahaanshaha sawirka Cotons of Adam's Eden
Ami, oo ah haweeney Coton de Tulear eey ah
'Ziggy, labkeena Coton de Tulear oo jira 8 sano. Qabiilka reerkeena. Waanu jecel nahay isaga!
Eeg tusaalooyin badan oo ah Coton de Tulear
Coton de Tulear Sawirada 1
buluug merle min pin iib ah
brussels griffon oo lagu qasay shih tzu
sawirada isku darka jiirka chiuaahua
dachshund talyaani iskudhafka cowska iibka ah
yorkshire terrier iyo iskudhafka dachshund
sawirada adhijirrada Australia